Fandaharana “Tsy ho tompon-trano mihono” Angaha tsy hoe hifandimby ao ireo minisitra ?
Fandaharana iray isaky ny zoma tolakandro ny tsy ho tompon-trano mihono ao amin’ny haino aman-jerim-panjakana TVM sy RNM,
ary raisin’ireo tsy miankina mpomba ny fitondrana. Saika ny Minisitry ny serasera sy ny Kolontsaina hatrany no nahazo laka tao anatin’io hatramin’izay ka hatramin’izao. Natao hiresahana sy hanazavana ny raharaham-panjakana samihafa. Tany am-boalohany, nambara fa hifandimby ao ny Minisitra samihafa mpikambana ao amin’ny governemanta fa tsy hoe: Rtoa Lalatiana Rakotondrazafy samirery. Tsy izay no miseho, fa toa zary olona iray hatrany no miresaka ao, ary indraindray aza lasa natao handokafana sy hampalazana ny tenany manokana, ankoatra ilay fanadiovan-tena niresahany ny raharaha mahakasika azy. Ny zoma lasa teo izao tsy nisy ny fandaharana rehefa tsy niteny Rtoa Lalatiana Rakotondrazafy fa tsy hoe: nisy minisitra hafa ao anatin’ny governemanta niaka-tsehatra. Tsy misy azo ambara mihitsy ve ny minisitra hafa mpikambana ao amin’ny governemanta no olona iray hatrany no mahazo laka sy homena sehatra ao? Sa kosa misy antony manokana tsy ahafahana miakatra ao? Ekena fa misy vaovaom-panjakana sy ireo departemantam-panjakana maro samihafa ao amin’ny TVM sy RNM, saingy miharihary sy tsy takona hafenina ihany koa ny fibahanan-toerana ataon’ny Minisitry ny serasera sy ny kolontsaina izay mazava fa amin’ny maha mpinisitra mpiahy ny haino aman-jerim-panjakana angamba. Mibahan-toerana ao ny vaovao momba ny voalaza fa zavatra ataon’ity minisitra ity na ny antokony rehefa misy an’izay. Toy ny hoe: fananana minisitera na minisitra iray ny TVM sy RNM indraindray ka mety izany ihany koa no isan’ny mahasadaikatra ireo mpikamban’ny governemanta sasany. Raha mpanohitra dia mety lojika noho ny fifanenjehana ara-politika, ary takian’izy ny hahafahany miteny amin’ny TVM sy RNM fa tany aloha, dia efa nisy ny hoe: olom-boafidy amin’ny lokon’ny fitondrana toa voasakana na tratry ny “censure” tsy ho afaka hiseho ao amin’ny TVM. Asa manao ahoana izany amin’izao ?
Politika Iray tsy mivaky ny TIM
Nisy omaly ny fivoriana niarahan’i Marc Ravalomanana tamin’ireo solombavambahoaka TIM (Tiako i Madagasikara) tao Faravohitra.
Bokan-trosa ny Fanjakana Mangotraka ny grevin’ny oniversite, mpandanja fiara,…
Miha mangotraka ny grevy etsy sy eroa, indrindra taorian’ny vava nataon’ny Praiminisitra ny alakamisy 14 septambra, fa tsy terena handoa vola amin’ny alalan’ny grevy ny Fanjakana,
Sao dia mba tsy rariny Ny vahoaka miandry lava, ny mpitondra migalabona
Lavitra loatra ny elanelana eo amin’ny mpitondra sy ny entina eto Madagasikara. Tsy resaka fidinana eny ifotony na tsia ataon’ny Filoham-pirenena na mpitondra Fanjakana endrika ivelany sy kisehoseho io,
Christine Razanamahasoa “Tsy ho tana intsony fa vitesy TGV io fampandrosoana”
Nandoka fatratra ny Filoham-pirenena sy ny Fitondram-panjakana ny Filohan’ny Antenimiaram-pirenena Rtoa Christine Razanamahasoa omaly, nandritra ny fanokafana ny fivoriana ara-potoana faharoan’io andrim-anjakana io.
Dany Rakotoson “Mba lanjalanjao ihany ilay werawera”
Mba lanjalanjao ihany ilay werawera, hoy ny mpandinika raharaham-pirenena, Dany Rakotoson, naneho ny heviny mikasika ny raharaham-pirenena ankehitriny.
AVI Amoron’i Mania “Tsy tokony hisy tsy maty manota eto”
Tao aorian’ny Faritra Vakinakaratra sy Menabe dia notanterahina tao Ambositra ny lao-bary an-dasim-paritrin’ny Antoko AVI na Asa Vita Ifampitsarana ho an’ny Faritra Amoron’I Mania ny 15 sy 16 oktobra 2021 lasa teo,